Sababta Hal Saac Loo Daawan Doono Xalqadda Uu Salman Khan Kaga Jiro Showga Koffee With Karan Oo La Ogaaday! - Hablaha Media Network
Sababta Hal Saac Loo Daawan Doono Xalqadda Uu Salman Khan Kaga Jiro Showga Koffee With Karan Oo La Ogaaday!
HMN:- Showga Koffee With Karan Season 5 ee uu daadihiyaha ka yahay Karan Johar, wuxuu u muuqdaa inuu yahay barnaamij markasta loo maareeyo habka ay taageereyaashu ugu xiran yihiin. Sababtoo ah isbedel ayaa lagu sameeyey xalqadda uu kaga jiro Salman Khan.
Showga Koffee With Karan (KWK) sida caadiga ah waxaa xalqad kasta oo ka mid ah la daawan jiray 40 daqiiqo illaa 50 daqiiqo. Marka lagu daro xayeysiimaha showgaan. Si kastaba ha ahaatee, wararku waxay sheegayaan in xalqadda ay kasoo muuqan doonaan Salman Khan iyo walaalihiis Arbaaz Khan iyo Sohail Khan ay noqon doonto mid ka mid ah xalqadihii ugu dheeraa ee abid lagu daawado showgaan.
Axadaan ayaa la daawan doonaa xalqaddaan, waxaana ay haatan wararku sheegayaan inay socon doonto wax ka badan HAL SAAC. Ilo ku dhow Karan Johar ayaa daaha ka qaaday inuu Sallu waxyaabo badan uga hadli doono showgaan.
Kuna darso keliya hadal kuma soo koobi doono arrinta ee wuxuu sameyn doonaa ficillo qosol leh si uu daawadeyaasha showgaan oo dhan u qanciyo. Inta badan martida kale ee barnaamijkaan hadal ayey kusoo afjaraan waqtigooda, iyagoo ka hadla aflaanta ay duubayaan iyo kuwa markaas tiyaatarrada u saaran.
Warbixintaani waxay sheegeysaa in muddo seddax saac iyo bar ah laga duubay Salman Khan marka laga hadlayo muuqaalkii koowaad ee rasmiga ahaa. Laakiin markii la jarjaray ka dib waxaa lasoo reebay hal saac. Sababta kale ee loo dheereeyey xalqaddaan ayaa waxaa lagu sheegay inay noqon doonto middii 100aad ee showga Koffee With Karan, taasoo ah arrin kale oo xiiso leh.